HTC One M8: အစွန်းရောက်ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှု | Androidsis
ကျွန်ုပ်တို့သည်မတူညီသော Android Terminal များခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုများနှင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပြည်တွင်းမတော်တဆမှုများကိုကောင်းစွာတုပနိုင်သည့်မတော်တဆမှုများကိုခုခံနိုင်စွမ်းကိုစစ်ဆေးရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ ဒီကိစ္စမှာဒီနေ့ငါတို့နဲ့သက်ဆိုင်ပေမဲ့၊ အစွန်းရောက်ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှု သိရန်အရာအားလုံးထက်ပိုပြီး oriented ဒီနောက်ဆုံးပေါ်မျိုးဆက်စမတ်ဖုန်းများ၏ကန့်သတ်သည်အဘယ်မှာရှိ.
အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ငါတို့တင်ပြမယ် HTC One ကို M8, တိုင်ဝမ်နိုင်ငံစုံနိုင်ငံ၏နောက်ဆုံးပေါ်အထင်ကရဖြစ်ရပ်တစ်ခုသည် ဘုံလိမ်ဖဲ့ခြင်း, မီးဖိုချောင်ဓါးနှင့်နောက်ဆုံးတော့တူ။ ဒီခက်ခဲတဲ့ဗီဒီယိုဂရပ်ဖစ်စမ်းသပ်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကဘာဖြစ်မယ်လို့သင်ထင်သလဲ။ ပူးတွဲပါဗွီဒီယိုတွင်အဖြေသည်ထိခိုက်လွယ်သူများအတွက်မသင့်တော်ပါ။
အခြားစတိုင်စမ်းသပ်မှုများတွင်ဥပမာ၊ Samsung ရဲ့ Galaxy S5 ဒီတူညီတဲ့စမ်းသပ်မှုရန်ဆင်းရဲသောသူကို၎င်း၊ Samsung ကစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် terminalငါဆွဲများအတွက်တက်အဆုံးသတ်ဟုတ်တယ်, အလွန်မြင့်မားသောဘား setting အဖြစ်ဝေးအစွန်းရောက်ခုခံသက်ဆိုင်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်တကယ့်တွန်းလှန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါက၊ နောက်ခံနှင့်နှစ်မျိုးလုံးပျက်စီးစေရန်ကြိုးစားသည့်ဘုံသော့ကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုကြည့်ပါ HTC One M8 ၏မျက်နှာပြင် \_ t၁၃ ရက်သောကြာနေ့မှာဂျေဆင်ရဲ့အသားညှပ်ဓါးဟာလှုပ်ရှားလာတာကိုတွေ့ရတာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာမပြောတတ်ပါဘူး။ TechSmartt.
ရှင်းနေသည်မှာ၊ အကယ်၍ သင်သည်စမတ်ဖုန်း၏မျက်နှာပြင်ကို HTC M8 ကဲ့သို့ရိုက်နှက်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဗီဒီယိုတွင်တွေ့ရသည့်တူနှင့်တူသည်၊ ယုတ္တိနည်းအရ၎င်းကိုအနှေးနှင့်အမြန်ရလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသော၊ ဤနောက်ဆုံး HTC terminal ၏ခုခံမှုကိုကြည့်ပါပထမ ဦး ဆုံးသောသံတူအပေါက်မပေါက်မီက Samsung Galaxy S5 ထက်သာလွန်သည့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခု
နောက်ဆုံးတွင်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာကိုအစမှအဆုံး၌ရရှိလိမ့်မည် terminal ကိုလက်တွေ့အသုံးမပြုနိုင်ပါဤအစွန်းရောက်ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုသည် HTC One M8 ထက်ကျော်လွန်ကြောင်းငြင်း ဆို၍ မရပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စမ်းသပ်မှု - HTC One M8
၎င်း၏မျိုးအားလုံးကဲ့သို့သတ္တိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအနတ္တ, ။ အနည်းဆုံး amoeba IQ ရှိသူမည်သူမဆိုသည်ဖုန်းကိုရိုက်နှက်ခြင်းသည်မကောင်းသောအကြံမဟုတ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားမှုနည်းနည်းမျှသာဖြစ်သည်။
အဆုံးမှာတော့စန္ဒရားလိုမိုက်မဲတဲ့အရာ၊ ဒီလမ်းမှာဖျက်ဆီးဖို့အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်း၊ ဒီအချိန်တွေမှာယူရို ၅၀၀ မှ ၆၀၀ အထိတန်ဖိုးရှိတဲ့မိုဘိုင်း။
Moto X + 1 ၏ပုံရိပ်သည်၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်လွှတ်တင်သည့်နေ့နှင့်အတူပေါက်ကြားခဲ့သည်
Android Tweaks - ဒီနေ့ touch screen ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်